Wararka Maanta: Khamiis, Mar 26, 2020-Qaramada Midoobay oo soo dhoweysay inay Soomaaliya gaartay go'aankii ugu dambeeyay ee deyn cafinta
“Guul laga gaaray barnaamijka HIPC' waa tallaabo weyn oo horay loogu qaaday horumarka dhaqaale ee Soomaaliya, taasoo u oggolaaneysa waddanka inuu u sii gudbo yoolkiisa muddada fog ee kobcinta dhaqaale ee loo dhan yahay iyo yareynta saboolnimada. Dhammaan dadka Soomaaliyeed waa ku faani karaan guushaan, ”ayuu yiri Wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan.
'Go'aanka 'waa mid mahadnaq iyo markhaati u ah mas'uuliyiinta dowladda dhexe' dib-u-habaynta maareynta maaliyadda ee dadweynaha. Waxay sidoo kale muujineysaa iskaashi xoog leh oo ka dhexeeya Dowladda Federaalka iyo Dowladaha xubinta ka ah Federaalka, waxayna dejineysaa tusaalooyin ku saabsan iskaashiga mustaqbalka ee arrintan iyo qeybaha kale,” ayuu yidhi James Swan.
Hay'adda Lacagta Adduunka (IMF) iyo Bangiga Adduunka ayaa aasaasay HIPC Initiative sanadkii 1996-kii, waana barnaamij ay ku jiraan 39 dal oo loo aqoonsan yahay waddamo aad u sabool ah kuwaas oo taageere ka hela bangiga adduunka iyo IMF, si aanay ula kulmin culays deyn ah oo ka badan awoodooda adeeg iyo maamul.
3/26/2020 5:37 AM EST